ရိုဒရီဂိုဒီယက်ဒေဝိဝါရ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ရိုဒရီဂို ဒီယဇ် ( ဗီဗာရ် ဒေလ် စိတ်၊ ဗုရဂေါသ?, c. ၁၀၄၈  - ဝါလင်စီယာ, ၁၀၉၉)ဟုလည်းလူသိများသော စိတ် ကမ်ပေယာဒေါရ် သည် လီဗန်တေး၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ် လီဗန်တေး ကို စိုးမိုးရန်ရောက်လာသော Castilian စစ်ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်သည်။ XI တွင် အိုင်ဘေရီယန်ကျွန်းဆွယ်သည် မည်သည့်ဘုရင်၏ အခွင့်အာဏာအောက်မရောက်ရှိ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သူသည် ဝါလင်စီယာကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီး ဇွန် 17၊ 1094 မှ သူသေ  ချိန်အထိ ဤမြို့၌ လွတ်လပ်သော သခင်ကို ထူထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ဇနီး Jimena Díaz သည် ၎င်းကို အမွေဆက်ခံပြီး မွတ်စလင်အုပ်စိုးမှုသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသောအခါ ၁၁၀၂ခုနှစ်အထိ ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။
ဗလင်စီယာဘုရားရှိခိုးကျောင်းအတွက် မစ္စတာစိတ်၏ထောက်ပံ့ကြေးဒီပလိုမာ။ စာသား၏ စာကြောင်း ၁၆တွင် ရက်စွဲကို မျဉ်းသားဖော်ပြထားသည်- «LXXXXº VIIIº post millesimum» ဆိုလိုသည်မှာ 1098 (Menéndez Pidal [1918:3])။ အခြားပြည်တွင်းဒေတာကြောင့်၊ ၎င်း၏ရက်စွဲကို ဇွန်လ ၂၄ ရက်၊ ၁၀၉၈ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် သတ်မှတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ စာတမ်း၏ လိုင်း ၃၄-၃၅ တွင်၊ စာသား၏အဆုံးစွန်နှင့် နောက်ဆုံးအပိုင်းတွင်၊ ရိုဒရီဂို ဒီယဇ်၏ လက်မှတ်သည် “အတ္တရိုင်းရိုင်း,တအုံနွေးနွေး,ငါသည်အိုစီရိုအထက်တန်းလွှာကိုပယ်ချ"” ပေါ်လာသည်။ 
Armando Menocal မှ La Jura de Santa Gadea (1887) သည် ဆယ့် siglo မှ ပျံ့နှံ့ခဲ့သော ဒဏ္ဍာရီ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကို ပြန်လည်ဖန်တီးသည်။သမိုင်းမှတ်တမ်းမရှိသော ဒဏ္ဍာရီများ နှင့် အချစ်ဇာတ်လမ်း များတွင် နှင့် လက်ရှိ လုံးဝ စိတ်ကူးယဉ်နေသည်ဟု ယူဆပါသည်။
↑ Véase Ramón Menéndez Pidal, «Autógrafos inéditos del Cid y de Jimena en dos diplomas de 1098 y 1101», Revista de Filología Española, t.5(1918), Madrid, Sucesores de Hernando, 1918. Copia digital Valladolid, Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo. Dirección General de PromocioneseInstituciones Culturales, 2009-2010. Original en Archivo de la Catedral de Salamanca, caja 43, legajo 2, n.º 72. Menéndez Pidal realiza la transcripción paleográfica en la pág. 11 y ss. del art. cit. Véase también Alberto Montaner Frutos y Ángel Escobar, «El Carmen Campidoctoris y la materia cidiana», en Carmen Campidoctoris o Poema latino del Campeador, Madrid, Sociedad Estatal España Nuevo Milenio, 2001, pág. 73 [lam.]. ISBN 978-84-95486-20-2 y los artículos de Alberto Montaner Frutos, «Rodrigo el Campeador como princeps en los siglos တမ်းပလိတ်:Siglo y တမ်းပလိတ်:Siglo» y Georges Martin «El primer testimonio cristiano sobre la toma de Valencia (1098)», en el número monográfico «Rodericus Campidoctor» de la revista electrónica e-Spania, n.º 10 (diciembre de 2010). Puesto en línea el 22 enero de 2011. URL <http://e-spania.revues.org/19945> Consultado el 28 de noviembre de 2011. Texto completo (edición del texto latino) en José Luis Martín Martín et al., Documentos de los Archivos Catedralicio y Diocesano de Salamanca (siglos တမ်းပလိတ်:Siglo-တမ်းပလိတ်:Siglo), Salamanca, Universidad, 1977, doc. 1, p. 79-81.
↑ La propuesta de fecha más temprana para el nacimiento de Rodrigo Díaz la planteó Menéndez Pidal situándola alrededor de 1043 (entre 1041 y 1047) en «Año y lugar del nacimiento del Cid»[လင့်ခ်သေ] (Boletín de la Real Academia de la Historia, t. 89, 1926, págs. 8-9) y posteriormente en La España del Cid (1929, t. II, págs. 684-685), mientras que la más tardía fue postulada por Antonio Ubieto Arteta en el entorno de 1054 (de 1051a1057) en El «Cantar de mio Cid» y algunos problemas históricos (Valencia, [Anubar antes art. en Lizargas, IV, 1972], 1973, pág. 177); aunque en 2011 Montaner Frutos concluyó que lo más adecuado sería situarla entre 1045 y 1049. Fletcher aceptó como más probable la de 1043 de Menéndez Pidal, pero indicando que incluso podría retrasarse hasta 1047; Martínez Diez señaló como más probable el año de 1048, y en todo caso no más tarde de 1050, posición que Peña Pérez considera una razonable postura intermedia. Véase Fletcher (2007:111), Martínez Diez (1999:32), Montaner Frutos (2011b:259-260) y Peña Pérez (2009:45).
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရိုဒရီဂိုဒီယက်ဒေဝိဝါရ်&oldid=738340" မှ ရယူရန်
၁၉ မတ် ၂၀၂၂၊ ၁၆:၀၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ မတ် ၂၀၂၂၊ ၁၆:၀၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။